Kwaphela isikhathi eside umdlalo "KS" wayengunkulunkulukazi othandwa kunabo phakathi ithimba abacibishelayo. Ngisho nalapho ihluzo kuwo ngomqondo ovulekile esiphelelwe isikhathi, futhi game Mechanics zemvelo kakhulu kunabayeni amanye amaphrojekthi, Counter Strike wahlala wobuciko. Kuze kube manje, it wadedelwa kakade lenqwaba imidlalo efanayo, okuyinto linebanga omkhulu izici, izikhali, amabalazwe, uhlamvu izikhumba nokunye, kodwa "COP" iyona engcono kunazo zonke emhlabeni. Yiqiniso, hhayi ifomu yayo yasekuqaleni - Onjiniyela Kulokhu wenze imizamo eminingana ukuze kuthuthukiswe nenzalo yabo, kukhishwa CS: Source, nezinye izinketho. Kodwa abaphumelelanga kakhulu kuze emgqeni Siye azifinyelelanga CS: GO. Imfihlo kwaba yiqiniso ukuthi akudingekile ukuba reinvent isondo. Onjiniyela nje wathatha inguqulo yasekuqaleni umdlalo futhi olusha ngokugcwele yayo - Ihluzo, i-physics, injini, izikhali, izindlela, namabalazwe. Ngokuvamile, konke okuqukethwe isibe entsha futhi zanamuhla - futhi umphumela waba ekhexisayo. Manje, kule "CS: GO" kudlalwa ngokuphelele zonke abalandeli ithimba abacibishelayo. Kodwa manje sizogxila eyodwa emisha ethile, okuvame ephambanisa abasebenzisi - bezigaba. ezimbalwa kakhulu abantu bazi impendulo ngqo umbuzo indlela yokuthuthukisa isikhundla ku "CS: GO", ngakho-ke le nkinga kumele inikezwe ukunakekelwa okukhethekile.
Yiziphi amanani abamemezeli "CS"?
Ngaphambi kokucabangela umbuzo indlela yokuthuthukisa isikhundla ku "CS: GO", kudingeka uqonde ukuthi njengoba ngokuvamile kuba. Ngakho, bonke umdlalo has nesishiyagalombili izihloko, okuyinto zihlukaniswe ngezigaba ezintathu - ngokulandelana, ngamunye kubo uneziqu eziyisithupha. Kuyinto isiliva, isigaba igolide esitolo futhi ngamunye wabo ezinhlwini lalo. Yiqiniso, umdlali ngamunye ulwela uthole ezinegunya ngangokunokwenzeka, kodwa ngezinye izikhathi abaqondi, lokho luwumgogodla lokhu kwakwenqatshelwe. Ngenxa yalokho, kunokuhlukana imibuzo mayelana nendlela yokuthuthukisa isikhundla ku "CS: GO". Ungagijimeli avuke - lokuqala ukuhlunga lokho ncamashi limelela, bese ucabanga ukuthi uludinga.
Lapho ukhetha okubhekenwe le "CS: GO" akanawo ephelele okungahleliwe - uhlelo ukhetha ngawe izimbangi ngubani bayalingana kuwe isikhundla. Ngakho, uma ucabanga mayelana nendlela yokuthuthukisa isikhundla ku "CS: GO", udinga kuqala cabanga ukuthi ufuna ukudlala nezitha namandla. Ingabe ukulungele ukujika enjalo? Nge ngamunye esicongweni esisha ngekhono ezingeni labamelene yakho iyokwanda ngokulandelana, kuyoba nzima kakhulu ukudlala. Ngakho ungacabangi ukuthi umgomo wakho - iwukuba uthole isikhundla esiphezulu. Amazinga ukukhonza kuphela kubonise ngokusobala ukuthi yiliphi izinga amakhono imidlalo ungumnikazi - futhi kulelizinga uyobe ukhethe isitha. GO: Lena injongo eyinhloko okuyiwona isihloko CS kwangena. Ukwandisa ezinhlwini ngaleyo ndlela kwenzeka ngesikhathi isikimu sasivumela eziyinkimbinkimbi, okuyinto boni abadlali abaningi. Ngakho-ke, kuyafaneleka kokuhlola kabanzi, ukuze uzoqonda ukuthi yini okudingeka uyenze ukuze sithuthukise isikhundla sakho.
Ngakho, ukuhlaziya zalesi simiso kufanele sigcwaliswe step by step. Okokuqala, cabanga yekucala iyiphi Isihloko CS: GO, okwandisa ezinhlwini nge kunqoba futhi ukwehla izilonda kubonakala ngemva kwalokho. Awu, bese ungakwazi fingqa ngawe ukuba Uhlolojikelele futhi wazi kahle ukuthi kuzodingeka uthole seziqu. Ake uqale nge iphuzu reference - kungcono lilula lapha. isikhundla ngasinye esisha unendlela yawo zero iphuzu. Uzithola okwamanje, uma uthola isihloko esisha. Okungukuthi, wena ngokushesha ngeke bakwazi ukuphuca kwalesi sihloko noma, kunalokho, awukwazi ngcono ngokushesha. Esimweni esinjalo, indlela ukulahlekelwa nendlela ukuthi siphakamise Isihloko CS: GO? Lo mbuzo ekhathaza abadlala eziningi - ezinye zazo wesulile esikhundleni sakhe kakade futhi bakholelwa ukuthi ngabo konke okungahleliwe. Kodwa lokhu akulona icala, kukhona uhlelo ecacile lapho umsuka zonke ukwanda kanye incipha.
Uma ufuna ukufunda ukuthi siphakamise Isihloko CS: GO, Kuyohlale ukunqoba. Iqiniso lokuthi isihloko ayikhuphuki ngenxa isibalo frags, hhayi ngokunemba yakho, noma inani headshots lokubulawa yakho. Zonke ichaze onqobayo yakho - kwi ezingaphezu kuka wena ngokuwina, kuzoba ngcono kakhulu ngawe. Khumbula iphuzu reference, okuyinto okukhulunywe ngaye ekuqaleni? Uzithola kuso uma ufika isiqu esithile. Ngemva kwalokho kudingeka ukunqoba izikhathi ezimbalwa ukuze uthole olandelayo - futhi emuva kuqalwa. Kuye isimo, une ukunqoba izikhathi ezintathu kuya kweziyisithupha ukuze uthole isikhundla esisha. Nokho, enye yezinkinga impikiswano kakhulu "CS: GO" - "Indlela yokuthuthukisa isikhundla?" - ukuxazululwa. Kodwa lokho phansi?
Manje sixoxe amacala uma uwine uhambe phezulu isihloko. Kodwa akwenzeki njalo uwine - kwenzekani uma ulahlekelwa? Uma kwenzeka kokunqotshwa wena emalini iphuzu eye uyasho ngenxa yalokhu kunqoba. Ngokwesibonelo, uma uthola isihloko esisha, futhi unqobe midlalo emibili (amaphuzu amabili wazuza ukuthuthukisa), kanti eyesithathu - ulahlekelwe, uzobe iphuzu elilodwa kuphela. Ngakho, kuvela ukuthi izihloko umdlalo inqubekela phambili yakho esele njalo ukuthi izinsiza ezincike onqobayo akho kanye ukulahlekelwa. Uma uqala ukudlala kwi reference iphuzu ke amaphuzu akho kuzoya ezimbi (futhi ngesikhathi iphuzu elithile uyoba bebek isikhundla), futhi umgwaqo kuyodingeka uqale lonke futhi.
Abantu abaningi banesithakazelo CS: GO isihloko ngesiRashiya. Nokho, lokhu akuyona inkinga enkulu, ngoba bebizwa silula, ngakho-ke akwenzi mqondo ukuhumusha kwabo. Ikakhulukazi uma ucabangela iqiniso lokuthi ingxenye inhlanganisela zibalwa ngokuthi "esiliva / igolide" nezinamba, njengokuthi "Isiliva-4".
Njengoba e "Maynkraft" akhiphe amadayimane: imfundo
Imfashini amakhodi for the "San Andreas" nokungalawuleki
Ubani owasungula "Maynkraft"? indaba yempumelelo
I-cocoa ne-marshmallow iyisiqalo esihle usuku!
Kungani ukuphila iminyaka engu-30, kuba lula kakhulu kunangesikhathi 20?
Burkina Faso - lapho kudabuka khona abantu abathembekile